Nhau - Cnc Router Kubatsira
CNC router inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yekuveza mumakore achangopfuura, inogona kukubatsira zvakanyanya kudzikisa mutengo wekugadzira.
1. Inogona kutsiva yetsika mashandiro mashandiro, kuwedzera zvinhu kushandiswa! Deredza iyo tsvina marara, nokudaro uchideredza mutengo wezvinhu.
2. Sevha basa, munhu mumwe anogona kushandisa akawanda michina.
3. Zvese zviyero zvekuverenga zvinoverengerwa nekombuta zvine huchokwadi hwakanyanya.
4. Hofisi yemuchina inogona kumiswa chero nguva, kuwedzera kana kudzika kumhanya, kugadzirisa kudzika, nezvimwe.
CNC Router inonyanyo kuve yakakamurwa kuita imwechete-musoro CNC yekucheka muchina, yakawanda-maitiro ekucheka muchina, uye otomatiki chishandiso shanduko machining nzvimbo. Cnc yekucheka muchina chakakosha michina yekucheka, kuchera uye yekugaya mapena eakagadziriswa mapaneru fenicha. Inokodzera makabati ewadhiropu, makabati, madhesiki emakomputa, fanicha yepaneru, fenicha yehofisi, masipika emapuranga, midziyo yemukicheni yematanda uye imwe fenicha yepaneru. Kubatsira kugadzirisa senge ndege kuvharidzira, kugaya, kumenya, kurova, uye kunyora. Nekuda kweayo otomatiki ekugadzirisa uye kugadzira, kuchengetedza-nguva, kuchengetedza-kwevashandi uye zvakanakira-kuponesa zvakanakira, yakavimbwa neruzhinji rwevanogadzira fenicha.
Maindasitiri anoshanda: fanicha yepaneru, makabati emakabati, makabati edhirobhu, fenicha yetsika, fenicha yehofisi nemikova yemukati uye mikova inotsvedza, mapaneru edare remakurukota nemamwe maindasitiri
Main mabasa: otomatiki chishanduko shanduko, kucheka, azvikuya, hollowing, slotting, punching, etc.
Iyo ina-chokurukisa CNC Router inyanzvi uye inodhura modhi ine misoro mina otomatiki switch, iyo inogona kuona ina-nhanho inoenderera basa. Iwo mana-maitiro ekucheka muchina anogona kuona ese ari maviri makabati muviri uye musuwo panhivi, ndiko kuti, zvese kabineti muviri uye musuwo pani zvinogona kugadziriswa, asi kugadzirwa kwekuita kwakaderera pane kweye mbiri-maitiro ekuchera muchina wekucheka, uyo inonyanya kukodzera kumamwe madiki uye epakati-epakati makambani emidziyo ari kungotanga. Dhisiki chishandiso-chinoshandura machining nzvimbo inoumbwa ne9kw main shaft uye mutsara-wekuchera chishandiso magazini. Iyi turu magazini inogona kuva nezvishandiso zvisere, zvishandiso gumi nembiri, zvishandiso gumi nematanhatu, uye zvishandiso makumi maviri. Mukuita kwekugadzirisa, iyo 9kw chokurukisa ichaerekana yaenda kumagazini yezvishandiso kunotora chishandiso zvinoenderana nezvinodiwa. Iyi 9kw chokurukisa inogona kupedzwa kunyangwe iri kugadzirisa machira edhoo, maitiro ekunyora, kuburitsa mapatani, kucheka nekucheka maburi. Inokodzera kune avo vanoda kugadzira makabati uye maumbirwo emusuwo, uye wedzera zvimwe zvakavezwa zvakavezwa lattice nguva nenguva. Shandisa diski chishandiso-chinoshandura machining centre kuti uite makabati emusuwo wekabineti, uye otomatiki chinja chishandiso kupedzisa maitikiro ese ekugadzirisa musuwo wekabineti panguva imwe chete, kubvisa kudiwa kwekushandurwa kwechishandiso chishandiso, kuwedzera zvakanyanya kugadzirisa kwekuita uye mhando yechigadzirwa.